Maxaa ka jira in Qabrigii Caroweelo ragga ay dhagax tuuraan dumarkana ubaxyo dhigaan! - BBC News Somali
Lahaanshaha sawirka Axmed Cawil
Image caption Raga dhagxaan ayay ku tuuraan goobtan, dumarkana ubaxyo ayay dhigaan
Cidina si kalsooni leh uguma dhiiran karto in ay xaqiijiso jiritaanka Caroweelo, waqtiga ay noolayd, iyo in sheekooyinka laga sheego ay yihiin kuwa jira oo rasmi ah. Balse waxay dadka oo dhan isku raacsanyihiin jiritaanka sheekada Caroweelo run iyo mala'awaal midkay ahaataba.
Waxay inta badan ragga ku xujeyn jirtay waxyaabo aan suurtogal ahayn, balse waxaa markasta xujadaasi furi jiray nin duurka ku dhuumaalaysanaya oo magaciisu ahaa 'Oday Biiqe'.
Mid ka mid ah xujooyinkii caanka ahaa ee ay ragga ku amartayna waxaa ka mid ahaa in ku tiri "ordaya oo ii keena udub dheer oo dhulka illaa cirka gaaraya", kadibna raggii ayaa u tagay Oday Biiqe, una sheegay xujadii, wuxuu kula taliyay "ku laabta Caroweelo, oo waxaad dhahdaan, udubkaas waan keeneynaaye waxaad na siisaa udub kale oo aan ka cabir qaadano".
Waxaa kale oo la sheegaa in Caroweelo iyo Oday Biiqe maalin la'isugu daray cunto soor ah oo lagu soo riday xeero, kadib waxaa dhacday in dhinicii ay xeerada ka cunaysay Caroweelo ay koosaartii (caanihii) ka dhamaatay, waxayna damacday in si dhagar ah ay caanaha uga soo jiidato dhanka Oday Biiqe, waxayna ku tiri "Oday Biiqoow hadalkii aad i tiri, sidaas ayuu qalbiga ii jeexay", iyada oo markaas farteeda il kaga jeexaysa soorta si caanaha dhankeeda ugu soo hooraan, kana dhigaysa in ay wax u tilmaamayso.
Balse Oday Biiqe ayaa la fahmay sirtii, wuxuuna ku yiri "Caroweelo sheekadana waa lab iyo qas", isaga oo gacantiisa ku walaaqay weelkii oo dhan si caanaha ugu wada qasmaan soorta.
Ka gudub Facebook daabacaad W.Q Mukhtaar
Wali ma tagtay Goobta la sheegay in ay fariisan jirtay #Araweelo maxaase ka aaminsan tahay Ubaxa dumarka ay saaran goobtaasi iyo dhagaxa Ragu ku tuuro? ila daawo sheekadan ! SHARE SII DHEH.
Posted by Mukhtaar Suudaani on Friday, 19 January 2018
"Waxaan maqlay in ay Caroweelo ahayd naag ragga aad u dhibaatayn jirtay, waloow dadka qaar ay qabaan in sheekadaas ay tahay mid la malo awaalay, dadkii ila socday ayaa waxa ay ii sheegeen in markan halkaan la marayo in ay ragga dhagxaan ku tuuraan, dumarkana in ay ubax dhigaan" ayuu yiri Mukhtaar Suudaani.
" Waa caado Soo jireen ah. waa wax mudo soo socday anigu waxaan ubaxa u dhigay waxaan u arkaa Caroweelo inay ahayd haldoorka haweenka Soomaaliya, ragguna ka xun yihiin hormarka gabadhaas ay wakhtigaas sameeysa" ayay tiri.
Sababta ugu weyn ee ay raggu ku necebyihiin ayaa ah arrinta ah xininyahada ragga laga saarayo, balse Muno waxa ay leeyahay "Ma hubo inay ragga xiniinyaha ka saari jirtay laakiin haddii ay jirtay anigu kuma taageersani sababtoo ah waa aabahay iyo walaalkay".
Waxaaba jira dumar badan oo magacyadooda ku lamaaniyay 'Caroweelo', kuna qortay ciwaanadooda baraha bulshada.
Labo dukaan oo lagu kala magacaabo Caroweelo iyo Oday Biiqe. Maanta ayaan sawiray aniga oo maraya magaalada Bangal oo...
Posted by Cabdinaasir Saxansoxo on Sunday, 24 December 2017